အိမ်ဖြူတော်က အသက်၅နှစ် မှ ၁၁နှစ်ကြား ကလေးငယ်များအား ကာကွယ်ဆေးထိုးမည့်အစီအစဉ် ထုတ်ဖော်ပြောကြား - Xinhua News Agency
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယား Polytechnic တက္ကသိုလ်၌ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်ပြင်ဆင်နေသည့်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဝါရှင်တန်၊ အောက်တိုဘာ၂၁ရက် (ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန (FDA) ၏အတည်ပြုချက်ရရှိရန် ဆိုင်းငံ့ထားသော အသက်၅နှစ် မှ၁၁နှစ်ကြားကလေးများအတွက် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးမည့် အစီအစဉ်ကို အိမ်ဖြူတော်ကအောက်တိုဘာလ၂၀ရက်တွင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
အောက်တိုဘာ၂၆ရက်တွင်ကျင်းပမည့် FDA ၏လွတ်လပ်သောအကြံပေးကော်မတီအစည်းအဝေးနှင့် နို၀င်ဘာ၂ရက်မှ၃ရက်အထိ ကျင်းပမည့် CDC’s (အမေရိကန်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးစင်တာများ) ၏လွတ်လပ်သောအကြံပေးကော်မတီအစည်းအဝေး မတိုင်မီကြိုတင်မျှော်မှန်းလျက် အောက်တိုဘာ၂၀ရက်တွင်ဘိုင်ဒန်အစိုးရအဖွဲ့ကအကယ်၍အသက်၅နှစ်မှ၁၁နှစ်ကြား ကလေးငယ်များအတွက်ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးအား အတည်ပြုချက်ရပါက ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန်အတွက် သေချာသည့်အစီအစဉ်အားကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးကာကွယ်ဆေးအားနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိမိသားစုများအား အဆင်ပြေစွာနှင့် မျှတစွာ လျင်လျင်မြန်မြန် ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ကြောင်း အိမ်ဖြူတော်ကကြေညာချက်တွင်ဖေါ်ပြထားသည်။
အသက်၅နှစ်မှ၁၁နှစ်ကြားကလေးများအတွက် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းအစီအစဉ်သည်လွတ်လပ်သော FDA နှင့် CDC လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အချိန်ဇယား ပေါ်မူတည်ကြောင်းအိမ်ဖြူတော်ကပြောကြားခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးတွင် CDC ၏ထောက်ခံချက်အရ နိုင်ငံတွင်ကာကွယ်ဆေးများစတင်ထိုးနှံနိုင်ရန် အသင့်ဖြစ်နေမည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားသည်။
ဘိုင်ဒန်အစိုးရသည်နိုင်ငံအတွင်းရှိအသက်၅နှစ်မှ၁၁နှစ်ကြားကလေးငယ် ၂၈ သန်းအတွက်ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်လုံလောက်သောကာကွယ်ဆေးများအား ဝယ်ယူထားပြီးဖြစ်ကြောင်းအိမ်ဖြူတော်၏ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်။ (Xinhua)
WASHINGTON, Oct. 20 (Xinhua) — The White House on Wednesday unveiled its plan to roll out COVID-19 vaccines for children ages5to 11, pending the vaccine’s approval by the U.S. Food and Drug Administration (FDA).
“In anticipation of the FDA’s independent advisory committee meeting on October 26 and the CDC’s (the U.S. Centers for Disease Control and Prevention) independent advisory committee meeting on November2to 3, today the Biden Administration is announcingaplan to ensure that, ifavaccine is authorized for children ages5to 11, it is quickly distributed and made conveniently and equitably available to families across the country,” the White House announced inastatement.
The start ofavaccination program for children ages5to 11 will depend on the independent FDA and CDC process and timeline, said the White House, adding the country will be ready to begin getting shots in arms in the days followingafinal CDC recommendation.
The Biden administration has procured enough vaccine to support vaccination for the country’s 28 million children ages5to 11 years old, according to the White House. Enditem